Kalfadhiga La-tashiga Buugga - Garyaqaanka Wershadaha Cannnabis - Tom Howard
Aynu Wada Korayno.
Falanqaynta ganacsigaaga Cannabis
Business U qaado Ganacsiga Xashiishkaada Heerka Xiga
✔ 60 - 75 Daqiiqo oo Falanqaynta Tom ah Meheraddaada
Analysis Falanqaynta qiimaha farshaxanka
Analysis Falanqaynta qiimaha Qiimaha Naafada
Strate Istaraatiijiyadda Codsiga & Falanqaynta
Review Dib u eegida Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada
Met Habka aruurinta iyo shuruudaha
Isbeddellada soo kordha ee warshadahaaga
Nuqul saxeexan oo ah Tom Book Book oo ku saabsan sharciyada Cannabis
$ 500.00 Qiimo dhimis Maalgashiga Mustaqbalka
Dhameystir daaqadda lacag bixinta oo ballanso wadatashigaaga si aad uga wada hadasho sida ugu wanaagsan ee looga dhex geli karo tartanka loo yaqaan 'cannabis' ee ka dhaca Illinois.
Waxaan si buuxda u dabooli doonnaa sharciga iyo istiraatiijiyadda si faahfaahsan inta lagu gudajiro kulanka 60-75 daqiiqo. Waxaan rajeynayaa inaan dhowaan kula hadlo
Xashiishka la Tashi Tom Howard
* Xulo Tirada
Kudar Kaar Cusub
Waan aqbalayaa maya
Previous Bixi $$ 500
Way shaqeeysay! Waan la soo xiriiri doonaa waqti dhow.
Boggu waa la wareejin doonaa 5 ilbiriqsi.
Buuggaaga u isticmaal Dadka Waaweyn ee Isticmaala Xashiishadda Cannabis
Ku soo dhowow adduunka xiisaha leh ee xawaaraha dheereeya ee xashiishadda.
Waad ku mahadsan tahay inaad halkaan nala joogto safarkaaga. Waxaad ka mid tahay qiyaastii 10-15 qof oo garaacaya boggan maanta. Waxaanuna jecel nahay inaad diyaar u tahay inaad gasho geedka cannabis oo aad na soo wacdid!
Marka tallaabada xigta ee aad nala shaqeyso waa in aan kharash gareyno $ 500 oo aad ballansato kulan wadatashi ah halkaas oo lagaa saari doono qulqulaya dabka cannabis. Waxaa jira wax badan oo ka socda adduunka ganacsiga, kulankaaga wadatashiga ayaa kuu jebin doona adiga oo dhan markaa waad arki doontaa haddii xashiishaddu kugu habboon tahay iyo in kale.
Soo galitaankaaga xashiishadda waxay ku bilaabataa codsi tayo sare leh oo heerkiisu aad u sarreeyaa oo gobolku kugu siinayaa laysan - waxaan ka wada hadalnaa dhammaan dhinacyada sida loo soo bandhigo mid ka mid ah kullamadaada iyo sababta ay ugu badnaan ugu kacayaan ugu yaraan $ 100,000 gobolka.
Imisa idinka mid ah oo runtii diyaar u ah inay galaan meel u baahan ugu yaraan $ 500k? Oo waa inaad kor u qaadataa - taasina waa tafaariiqle (qaybsi).
Marka waa inaad naftaada ilaaliso marka hore inaad latashi ka hesho qareenka warshadaha xashiishadda oo aad aragtay oo aad maqashay ka hor intaadan soo bandhigin khibrada uu u leeyahay warshadaha. Waxaad waxbadan ka baran doontaa ganacsiga oo waxaad awood u yeelan doontaa inaad sameyso go'aano fiican oo ku saabsan sida loo wajaho warshadaha xashiishadda.
La-tashigu wuxuu kugu socodsiinayaa tillaabooyinkaaga xiga waxayna ku siinayaan rajooyin macquul ah oo ah inaad riyada cannabis u rogto.
Waxay socdaan inta u dhexeysa 60 iyo 90 daqiiqo. Sidoo kale qof waliba wuxuu helaa koobiga buugga cannabis ee Tom laga soo bilaabo 2010 oo halkan gaadhay halka uu maanta joogo.
Oo waxaad heli kartaa mid bilaash ah sidoo kale. Khidmada la tashiga ayaa la soo celinayaa haddii aad u xajisid qareennadeena cannnabis qaangaarkaaga ganacsiga u adeegsada amaah 2 saacadood oo shaqo oo lacag la'aan ah, taasoo ka badan $ 500 qiimaha lagu soo dallacay kalfadhiga.
Iibso qunsuliyadda hadda kahor inta aanan joojin aqbalitaanka macaamiisha cusub. Mar labaad - waxaan wali adeegsaneynaa habdhaqanka ugu wanaagsan ee SEO si aan u koreyno tan, waxaan sidoo kale ka wada tashan karnaa shabakadaada iyo qorshayaashaada barnaamijka wadatashiga.
Goor dhaw ayaan kula soo hadlayaa
Ka baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan Qareenkeena Wershadaha Cannabis websaydhkiisa ku saabsan ku dhaqanka sharcigiisa ee hoos ku xusan.
Ilaa iyo sanadkii 2010, Thomas Howard wuxuu cilmi baaris ku sameynayey kuna daabacayay shuruucda xashiishadda oo hada wuxuu caawimaad siiyaa shirkadaha soo galaya xashiishadda cannabis oo leh:
→ Codsiyada Shatiga Xashiishka
Tips Tilmaamaha loo hoggaansamo
Iibso / iibiyo xulashooyinka ganacsiga
Ballanso La-tashigaaga Hada